पार्टी एकतामा ईश्वर पोखरेल गायब » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पार्टी एकतामा ईश्वर पोखरेल गायब
तेस्रो धारको नेतृत्व भीम, ईश्वरलगायतले गर्ने ?
बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबले नयाँ पार्टी गठन भएपछि ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, योगेश भट्टराई गायब भएका छन् । ओली र माधव नेपालका समकालीन पोखरेलभन्दा जुनियर नेताहरू यसअघि नै एमालेमा उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । त्यसकारण पनि पार्टीको बैठकमा उनको वरीयता पछाडि पर्ने सम्भावना देखेपछि उनले आफ्नो महासचिव पद नै धरापमा राखिदिएका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झल्को आउने गरी नयाँ पार्टीमा नौजनाको हाइकमान्ड मात्र बन्ने भएपछि पोखरेलले विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाउन सहयोग गरेका हुन्, एमाले स्रोतले भन्यो । यस विषयमा अध्यक्ष ओलीसँग पनि उनको पटकपटक छलफल भएको थियो । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली र दक्षिण एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पोखरेल सातौँ वरीयतामा छन् । यसअघि उनी एमालेको नवौँ वरीयतामा थिए । माधव नेपाललाई तेस्रो वरीयतामा राख्दा झलनाथ खनाल गायब भएका छन् ।
एकीकृत पार्टीको महासचिव बनेर एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेलले छलाङ मारेका छन् । आफ्ना सहयोद्धाहरूलाई पछाडि पार्दै उनी दोस्रो पुस्ताको मुख्य नेता बन्न सफल भएका छन् । यसो त पोखरेल र पौडेल आठौँ महाधिवेशनमा एउटै टिममा थिए । जतिबेला पोखरेलले महासचिव र पौडेलले सचिव जितेका थिए । टिम व्यवस्थापन गर्न र पौडेललाई जिताउन बुटवल महाधिवेशनमा सचिवका आकांक्षी सुरेन्द्र पाण्डे ‘ब्याक’ भएका थिए ।
कार्यकर्ता भनेपछि हुरुक्कै हुने पौडेलका कार्यकर्ता पनि उस्तै छन्, जो पौडेलका लागि ज्यान नै दिन तयार हुन्छन् । पौडेल यस्ता नेता हुन्, जो एमालेभित्र र अन्तरपार्टीमा पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्षम छन् । उनको यही मध्यमार्गी र अह्राएको काममा नतिजा निकाल्न सक्ने खुबीकै कारण ओली र प्रचण्डको पनि विश्वास जित्न सफल भएकैले दुवै नेताले महासचिवमा विश्वास गरे । वामदेव गौतमले कुनै पनि हालतमा ईश्वर पोखरेललाई साइड लगाउनुपर्ने योजना बनाउँदा पौडेलका लागि सहज भएको थियो । बर्दियामा आफ्नो हारको एक कारण गौतमले पोखरेललाई दोष दिँदै आएका छन् ।
२०७० सालको चुनावमा रूपन्देही र नवलपरासी दुई ठाउँबाट उठ्न खोज्दा उनी कार्यकर्ताकै दबाबका कारण रूपन्देहीबाट मात्र उठेका थिए । त्यतिबेला माओवादीका तत्कालीन नेता डा.बाबुराम भट्टराई पौडेलसँग पराजित भएका थिए । पौडेलका कार्यकर्ताहरूले उनको जितलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका थिए । नयाँ महासचिवका रूपमा उदाएका पौडेलको खास परीक्षा भने अब सुरु भएको छ । किनकि एमाले र माओवादीको अन्तर्घुलनबाट बनेको नयाँ पार्टीको सांगठनिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुगेको छ । ०६६ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेल एउटै टिममा थिए । पोखरेल र वामदेव गौतमको समर्थनमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष बने । झिनो मतले केपी ओली त्यतिबेला अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । जब पोखरेल र गौतमले ओलीलाई समर्थन गरे, नवौँ महाधिवेशनमा परिस्थिति उल्टियो । तत्कालीन अध्यक्षलाई संसदीय दलमा पराजित गरेर विजयी यात्रा सुरु गरेका ओलीले नभन्दै पार्टी अध्यक्षमा पनि बाजी मारे ।
संगठनमा जमेका पोखरेलका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको ठूलो पंक्ति छ । आफ्नै गुट बनाउन खासै रुचि नराख्ने पोखरेल पार्टीमा सधैं संस्थापन हुन् । ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा विराजमान गराउनेमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसैको थियो भने त्यो वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलको नै थियो । एमालेमा गौतमको स्थायी खाले टिम छ भने पार्टी संगठनमा पोखरेलको खासै पकड छैन । माधव नेपालको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी उनलाई बोक्ने ईश्वर नै थिए, झलनाथ खनालतिर उभिँदा खनाल अध्यक्ष बने, ओलीको हकमा पनि त्यही भएका थियो । प्रस्ट विचार राख्ने, निर्णय र संगठनका लागि दिनरात भिड्ने कडा मिजासका पोखरेल आठौँ र नवौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा विजयी भएका थिए । एमालेका भावी अध्यक्षका रूपमा हेरिएका उनी यतिबेला आफना सहयोद्धा विष्णु पौडेलका लागि महासचिव पद त्याग गरेर नयाँ पार्टीको हाइकमान्डका रूपमा रहेको सचिवालय सदस्य भएर बसेका छन् । गएको संसदीय चुनावमा सम्मानजनक मतका साथ काठमाडौँ ५ बाट जितेका पोखरेल यतिबेला रक्षामन्त्री छन् । उनी सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा छन् । अर्थात् अहिलेको सरकारको उनी दोस्रो वरीयताका मन्त्री हुन् । वर्तमान सरकारमा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री छैनन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पोखरेलले पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री मात्रै भएर पनि चित्त बुझाएको बताउने गरेका छन् । तर, उनी ओलीकै कोपभाजनमा परेको अहिलेको पार्टी एकताबाट पनि पुष्टि भएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: नीति तथा कार्यक्रममा संविधान सशोधन न पर्नु दुःखको विषय-मिलेन्द्र रिजाल
NEXT POST Next post: ओलीलाई देउवाको चेतावनी : हावादारी गफ नगर्नुस्
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५ १५:२४